Nzira 10 dzekuchengetedza Imba Yako Kubiwa
Munhu wese anoziva kukosha kwekuchengetedza imba yakachengeteka. Rudzi rwakakodzera rwechengetedzo runogona kukuchengetedza iwe, vako vaunoda uye nezvinhu zvako kubva pakubiwa uye nedzimwe mhando dzeanogona mhirizhonga ekupaza-mukati. Neraki, pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita kusimudzira kuchengetedzeka a ...
Bhatiri Yakagadziriswa Chengetedzo Kamera kana Solar Inowaniswa Chengetedzo Kamera?
Solar chengetedzo makamera uye bhatiri-inofambiswa yekuchengetedza makamera sarudzo mbiri dzekutarisa nekutarisa zvivakwa munzvimbo dziri kure uye dzakaoma kwenzvimbo. Kunyange zvigadzirwa zvakagadziriswa zvakanyanya zviripo mumapoka ese ari maviri, mutsauko uripo maratidziro avanoita kuda kwavo kwesimba. W ...
Nhanganyaya kune hunhu uye zvakanakira tembiricha kuyerwa uye kumeso kuziva kwakabatanidzwa muchina
Kuti udzore kupararira kwehutachiona, chiyero chetembiricha tembiricha chinoshandiswa munzvimbo zhinji, icho chine zvazvakashatira pakushanda zvakanaka uye zvine njodzi huru. Kuyera kwetembiricha yechizvarwa chechipiri cheAopvision uye kuzivikanwa kumeso kwese-mu-imwe muchina inoshandisa yakakwira-chaiyo infrared modul ...